Rehefa miresaka ny printsy satriana saodiana sy praiminisitra espaniola dia mety ho orinasa lehibe tsy miankina amin'ny UNWTO izany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Rehefa miresaka ny printsy satriana saodiana sy praiminisitra espaniola dia mety ho orinasa lehibe tsy miankina amin'ny UNWTO izany
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny anjara asan'ny Saodiana amin'ny fizahan-tany manerantany, ary ny foiben'ny foiben-toeran'ny UNWTO avy any Espana mankany Arabia Saodita dia mety ho ambony tao anaty fandaharana tamin'ny antso an-tariby nataony androany. Ny antso misy eo amin'ny printsy satroaly Saodiana Mohammed bin Salman sy ny praiminisitra Espaniola Pedro Sánchez androany dia manokatra efitrano fiheverana ho amin'ny hoavin'ny fizahan-tany manerantany.
Araka ny notaterin'ny lahatsoratra mitovy amin'i Vaovao Arabo ary ny Gazety Saodiana androany dia niresaka tamin'ny praiminisitra Espaniola Pedro Sánchez ny printsy satro-boninahitra Mohammed bin Salman avy any Arabia Saodita tamin'ny Alatsinainy.
Nifanakalo hevitra momba ny fifandraisana roa tonta eo amin'ny Arabia Saodita sy Espana sy ny fomba fanatsarana azy ireo izy ireo.
Manantena ny manam-pahaizana fa ny antony iray lehibe ao ambadik'ity resaka avo lenta ity dia ny drafitr'i Saudi Arabia hanolotra ny famindrana ny World Tourism Organisation ho any RIyadh.
Ny famindrana ny UNWTO HQ avy any Espana mankany Arabia Saodita dia mbola tsy tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fivorian'ny UNWTO General Assembly izay kasaina hatao amin'ny volana novambra any Maraoka.
Ny ankamaroan'ny firenena mpikambana ao amin'ny UNWO dia tokony hifidy amin'ny tolo-kevitra toy izany.
Najanona na natomboka ve ity hetsika ity androany, fony ny Zanak'andriana tao Saudi Arabia Ny printsy Mohammed bin Salman dia niresaka tamin'ny praiminisitra Espaniola Pedro Sánchez an-telefaonina?
Fantatra fa ny olana momba ny fizahantany lehibe dia matetika tsy fanapahan-kevitry ny minisitry ny fizahantany, fa ny mpitondra fanjakana na eo amin'ny sehatra filoham-pirenena.
Spain dia mpikambana mpanatanteraka maharitra ho an'i UNWTO. Raha tena zava-misy ny fifindra-monina amin'ny fanjakan'i Saudi Arabia, dia ho mpikambana maharitra i Saudi Arabia. Ity dia dingana iray lehibe manandanja eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany.
Indostria lehibe ho an'ny Espana sy Saudi Arabia ny fizahantany, saingy tsy isalasalana fa tonga hamonjy an'ity sehatra manerantany ity i Saudi Arabia mandritra ny areti-mandringana manerantany miaraka amina miliara ampanjifaina sy natokana.
Arabia Saodita dia efa mpampiantrano ivon-toerana UNWTO isam-paritra, miaraka amin'ny ivon-toerana ho an'ny WTTC.
Ny mpikambana ao amin'ny UNWTO dia firenena soloin'ny minisitry ny fizahantany. Ireo mpikambana ao amin'ny WTTC dia miara-mitondra ny indostria tsy miankina lehibe indrindra an'ny mpandray anjara amin'ny fizahantany.
UNWTO dia manana teti-bola kely. Mba hitarihana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany amin'ny krizy ankehitriny dia mila teti-bola lehibe. Mila fahaiza-mitarika tsara kokoa amin'ny tranokalan'ny UNWTO ihany koa izy io.
Izay mety ho hita vao taona vitsy lasa izay tsy ho vita intsony, mety ho lasa zava-misy ankehitriny. Ireo firenena miankina amin'ny fizahantany dia manjary kivy tanteraka. Lasa mitady vola sy mpitondra izy ireo. Saudi Arabia dia afaka manome azy roa.
Na aiza na aiza no misy ny minisitry ny fizahantany Saodiana Ahmed Al-Khatee, dia izy no VIP voalohany. Miantso 911 izao tontolo izao ary namaly i Saudi Arabia tsy tapaka mandritra io krizy io. Ny Minisitry ny Saodiana dia nanatrika ny kaonferansa UNWTO isam-paritra hatreto.
Tsy azo lazaina ho an'i Espana izany. Rehefa tsapan'i Espana ny tena fandrahonana hahavery ny foiben-toeran'ny UNWTO, dia nanatrika ny fivorian'ny vaomieram-paritra ho an'ny Africa tany Cabo Verde i Espana. Manana firenena mahaleo tena 54 i Afrika, ary maro amin'ireo no mifidy ao amin'ny UNWTO.
eTurboNews nanomboka nitatitra momba ny drafitra hifindra UNWTO amin'ny volana Jolay. Amin'ity lahatsoratra ity dia nilaza ny eTN fa ny famindrana ny foiben'ny UNWTO avy any Madrid mankany Riyadh dia hanisy tombo-kase ny Etazonia amin'ny fizahan-tany.
Espaina sy firenena maro any Eropa dia tsy dia faly amin'ny Arabia Saodita mandray andraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Izy ireo dia mitondra zavatra etsy sy eroam zon'olombelona hatramin'ny 11 septambra, rehefa mihetsika manohitra ny hetsika toy izany ataon'ny Fanjakana Saodita amin'ny lafiny diplaomatika.
Ny fomba fiasa diplaomatika toy izany dia nilalao tamin'ny lafiny roa. Arabia Saodita dia niasa erak'izao tontolo izao sy tao ambadiky ny sehatra mba hanao lobby ho an'ny drafiny.
Mety ho mpamaky ranomandry ny antso anio eo amin'ny praiminisitra Espaniola sy ny printsy satro-boninahitra Saudi Arabia.
Ny fomba hanatsaran'i Espana sy i Arabia Saodita ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana dia tsy azo eritreretina ihany amin'izao fotoana izao.
Avianca Airline dia mahita andro vaovao: miala amin'ny...
September 20, 2021 ao amin'ny 13: 18
Tsy ho lesoka fotsiny izany fa hampihoron-koditra. Tsy izany ihany no ho hadalana, fa tsy hamokatra.
Aleo mitokana fa tsy miaraka amin'ny naman-dratsy.
Tsy azoko an-tsaina akory ny handeha ho any amin'ity firenena ity momba ny fivoriana, raha matahotra aho ho an'ireo olona hiasa ao.
Mety raha mandoa vola 1 tapitrisa Euros isam-bolana amiko izy ireo dia handinika herinandro aho.